Ibsa Ijjannoo Waldaa Qorannoo Oromoo fi Waldaalee Hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaa -
Ijjechaa Barattootaa Oromootiif Ummata Oromoo Ilaalchisee
Gocha farrummaa ummataa Oromotiif qabu irraa kan ka’e mootummaan Itoophiyaa Ijjechaa seeraan alaa barattoota Oromoo tiif ummata Oromoo hiriira nagaa bahe irratti raawwate cimsinee kan balaaleffannu ta’u keenna ibsina. Ijjeechaa garaa hammeennaan barattoota Oromoo irratti raawwatameef hoggantoota mootummaa abbaa irreetiin ala qaamnii biraa itti gaafatamu akka hin jirre amanna. Ijjechaan bara baraan dhala Oromoo irratti raawwatamu gocha fixiinsa sanyii Oromoo ta’uuti hubbanna. Hoggantootii mootummaan Itoophiyaa TPLFn durfamu Dhiiga ilmaan Oromoo jissuu irraa akka of-qusatan akkeekkachiifna.
Maqaa misooma qindomina qabuu fiduuf jechuudhaan tarsiisoo mootummaan abbaa irree lafa Oromoo ummata Oromoo irraa buqqisuudhaan deeggartootaa fi abbaa fedheef kennuuf maqaa “Addis Ababa and Oromiya Special Zone Joint Development Master Plan” jedhuun moggaase raawwii isaaf tattafachaa jiru cimsinee kan balaleeffannu ta’uu ibsina. Karoorrii kun akkuma ummata Oromoo biyya keessa jiruuf dhimmii kun kallatiin ilaalu biratti fudhatama hin qabne, nu Oromoota biyya ambaa jiraannu birattis akka fudhatama hin qabne ibsuu barbaanna. Mootummaan abbaa irree Impaayeera Itoophiyaa qondaaltoota siyaasaa isaa ijjechaa ilmaan Oromoo keessatti kallatiin qooda qaban hatattamaan too’annoo jala oolanii gara seeraati akka dhiihatan akka godhu akkeekachiifna. Galmaa’an gahuu kaayyoo kanatiif dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman hudumtuu mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa godhan gaafanna. Gochaan ummata Oromotiif ummattoota biroo Itoophiyaa Keessa jiran ukkamsuudhaaf mootummaan Itoophiyaan yeroo yerooti fudhatamaa jiru, fixiinsa sanyii namaa akka ta’e hubatamee qaamnii dhimmii Kun ilaalu kan akka International Criminal Court (ICC) qorannoo shakkamtoota yakka kanaa gara seeraati dhiheessuuf barbaachisu amumma akka eegalan gaafanna.
Maatii Wareegamtoota ilmaan Oromoo ijjechaa mootummaan TPLFn raawwatameen dhuman hundaaf gadda guddaa nutti nagahame ibsina. Dhiigii ilmaan Oromoo dhiiga bineensa bosonaa akka hin taane hubannee gumaa isaanii deebisuudhaaf qabsoo gaggeeffamu keessatti deeggarsa nurra barbaadamu godhuudhaaf qophii ta’uu keenna ibsina. Gaddii keessan gadda keennaaf gadda ummata Oromoo cufaa. Kanaafuu,gadda keessan isan waliin dhaabbanne isin sabbarsiisuuf qophii ta’uu keenna ibsina. Galatii ilmaan Oromoo qabsoo mirgaa Oromootiif kufanii bilisummaa saba Oromootiif walabummaa Oromiyaa callaa akka ta’e hubbanna.
Barattoota hidhaman hundaa haala duree tokko malee akka gad dhiifaman cimsinee gaafanna. Hidhaamtoota Siyaasa mana hidhaa Impaayeera Itoophiyaa keessa jiran maraa akka gad dhiifaman cimsinee gaafanna. Ummatii Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiraannu qabsoo haqaa Oromoo keessatti ummata Oromoo biyya jiru cinaa jiraachuu keenna yeroon mirkaneessinu ammaan kana jennee amanna.
Waldaa Hawaasa Oromoo Chicago
Waldaa Hawaasa Oromoo Ohio
Waldaa Hawaasa Oromoo Michigan
Waldaa Hawaasa Oromoo Nashville fi Memphis, Tennessee
Waldaa Hawaasa Oromoo Kentucky
Waldaa Hawaasa Oromoo Seattle
Waldaa Hawaasa Oromoo South Dakota
Waldaa Manguddoo Oromoo Minnesota
Waldaa Hawaasa Oromoo Denver
Previous Poolisiin federaalaa sochii uummata oromoo facebookiin taasisuu dhaabuuf socho’aa akka jiru dhaqeenyeerra kanaaf Oromoo kan taatan…
Next World Wide Oromo Community Rallies Against Ethiopian Tyranny